२२ दिन बिदा कटौती सबैका लागि ६७ दिन बिदा
काठमाडौँ, चैत १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २२ दिन कम सरकारी बिदा दिनेगरी सरकारी बिदाको कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि पत्रकारलाई बैठकबारे जानकारी दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७५ सालमा सरकारी बिदा कटौती गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । यसअघि दिंदैआएको सरकारी बिदाभन्दा २२ दिनको सरकारी बिदा कटौती गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ८९ दिन सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाका अनुुसार सम्बन्धित धर्मालम्बीका लागि २२ दिन र सबैका लागि ६७ दिन बिदा दिइनेछ । अहिलेसम्म वर्षभरिमा १०४ दिन सरकारी बिदा दिने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जापान सरकारले वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा गर्ने सहयोग स्वीकृत गरेको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । नेपालको आर्थिक तथा समाजिक विकासका लागि जापान सरकारले ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नेभएको छ । त्यस्तै बैठकले विशिष्ट श्रेणी सेवा सुविधाका लागि दुई चिकित्सक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार डा. बिदासिंह शाह र डा. दिलीप शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो । सोहीअनुसार सरकारका दुई मन्त्रीको विदेश भ्रमणको स्वीकृति बैठकले प्रदान गरेको छ ।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अजरबैजानको भ्रमणमा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थाइल्यान्डको भ्रमणमा जानुहुनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा भने छलफल नभएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । बैठकले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सङ्घीय संसद्मा हुने सम्बोधनको विषयमा पनि छलफल गरेको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा कानुन मन्त्रालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिसहित ८३० स्थानीय तहमा श्रेणीबाहेक ५७ हजार ३५४ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । मन्त्रालयहरूमा यसअघि ३२६० कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । अब कटौती गरेर २६५४ कर्मचारी मात्र रहनेछन् ।